Balfi Qoshee sigigaachuun lubbuun nama tokko darbeera
Balaa sigigaachuu kuusaa balfaa Qoshee jedhamuun beekamuun uumameen namni tokko du'eera.
Diraamaan 'Min Littaazaz' jedhamu erga TV Faanaatiin darbuu eegalee waggaafi baatii jaha guuteera. Dhimmoota hawaasummaa diraamichi kaasuun alattis dhimmoota siyaasaa irratti xiyyeefachun beekama. Oggeessonni diraamaa kana attamiin ilaaluu?
Masaraa mootumoota Itoophiyaa kiiloo afur argamu keessa yeroo garaa garaatti bulchitoonni mana isaanii godhataniiru. Ofii maalitu keessa jira. Isa kamitu daawwatama? Kanneenif nama nu daawwachiisu iyyaafanneerra.
Laggeen magaalaa Finfinneefi qarqara isaanii misoomsuuf kan oolu irbaanni tokko qarshii miiliyoona 5 itti bahe har'a taasifama.
Indooneeziyaan magaalaa guddooshee akka jijjiirtu beeksiste
Jaakaartaan, lafa jireenyaa namoota miiliyoona 10 yoo taatu, liqimfamaa jirti rakkoon tiraafiikaa ishees isa hamaadha.
Hospitaala Beetel: Barattoonni m/barumsaa Waaqoo Guutuu 'haala gaariirra jiru'
Barattooni mana barumsaa Waaqoo Guutuu magaalaa Finfinneetti argaman rakkoo fayyaa isaan mudaten gara hospitaala geeffaman.
Finfinnee irrattis ta'e oromiyaa irratti mootummaan uummataan filatame waan hin jirreef, tokkoffaa dhimmi daangaa Finfinneefi Oromiyaa gidduu jiru lammaffaan ammoo naannoo magaalota uummata qubachiisuuf sagantaan jiru akka dhaabbatudha.
Albeemoota sirbaa shan baase jira. Weellistoota akka Araggaahany Wooraashiifi kn waliin hojiilee artii hedduu hojjate jira. "Minawuu Qazqaza fiqiraachiin" hojiiwwan isaa keessaa kan beekamuudha.
Finfinneen guyyaa konkolaataan hin sochoone marroo sadaffaaf labsite
Magaalaan guddoo Itoophiyaa Finfinneen jireenya nagaa qabeessa qabaachuufi faalama qilleensaa xiqqeessuuf guyyaa konkolaataan hin sochoone labsite.
Obbo Barakat Simoon Ministira Beeksisaa ta'uun dabalatee sadarkaa adda addaatti tajaajilaniiru.
Suuraan: Lammiileen Itoophiyaa ayyaana Cuuphaa kabajan
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ayyaana Cuuphaa kan Gooftaa Iyyasuus Kiristoos itti cuuphame yaadatu kabajan.
Fiigicha guddicha Itoophiyaa baranaa irratti kan Ertiraa 5 dabalatee atileetonnii biyya alaa 400 ni hirmaatu jedhan qopheessitoonni.
Obbo Yaared Zarihuun miliqsuun namoonni himataman guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhihaatanii ture.
''Dubartiin yoomiyyuu mana ofii hin hattu'': jiraattota Finfinnee
Muummichi ministiraa Itoophiyaa kaabinee isaanii keessatti dubartoota %50 muuduun isaanii lammiilee biratti hiika maalii qaba?
Miseensoonni kaabinee mootummaa federaalaa har'a muudaman bu'uura ga'umsaa isaanii irratti hundaa'uun kan filataman akka ta'e ministirri mummee Dr Abiy Ahimad himaniiru.
Namoonni kutaa biyyaa irraa gara Finfinneetti hedduu ni godaanu. Hundinuus waan boor irra geenya jedhan hawwii isaanii qabatanii gara magaalattii seenu. Yeroo ammaa garuu Finfinneen guuttee kan dhangala'aa jirtu fakkaatti.
Finfinneetti dhukaasa poolisoota gidduun lubbuun sadii darbe
Magaalaa Finfinnee Walloo Safar naannoo mana jireenyaa miseensoota paarilaamaatti waldhabdeee miseensoota poolisii federaalaa jidduutti umameen poolisoonni sadii ta'an du'unsaanii barame
Komishinarri Komishinii Poolisii Finfinnee Mejar Jeeneraal Daggifee Badii ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin waan jedhan, sababa alaabaatiin walqabatee, akkasumas sababoota seeraan alaa biroon waliigalatti lubbuun namootaa 28 darbeera.